Mmehie Mgbasa Ozi Mgbasa Ọrịa I Kwesịrị Zere | Martech Zone
Mmehie Azụmaahịa Mgbasa Ọha Mmadụ I Kwesịrị Izere
Ọtụtụ mgbe, ana m anụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekwu maka mgbasa ozi mmekọrịta dị ka a ga - asị na ọ bụ naanị usoro mgbasa ozi ọzọ. Mgbasa mgbasa ozi karịrị nnọọ nke ahụ. Enwere ike nyochaa mgbasa ozi ọha na eze maka ọgụgụ isi, nyochaa maka nzaghachi na ohere, jiri nkwurịta okwu na atụmanya na ndị ahịa, jiri iji zube ma kwalite akara gị nye ndị na-ege ntị dị mkpa, ma mee ka ndị ọrụ gị na ikike ikike na aha gị dịkwuo elu.
Usoro ahia dijitalụ ọ bụla dị irè gụnyere ihe dị mkpa bụ mgbasa ozi mmekọrịta. Mbido ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ otu n'ime usoro ntanetị dijitalụ kachasị mma maka ịkwalite azụmaahịa na-aga n'ihu ngwa ngwa, ma ọ bụrụhaala na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta ziri ezi. Maka ndị bịara ọhụụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dijitalụ, ịme ihe dị mma na izizi na soshal midia dị oke mkpa dịka ha na-enweta otu ohere ime ya. Itufu ohere ahu putara ida n'azụ ndị asọmpi na idozi aha ọma nke n'onwe ya abụghị ọrụ dị mfe. Jomer Gregorio, Digital Marketing Philippines
Nke a bụ 8 Social Media Marketing Mejọọ Zere
Inweghi usoro mgbasa ozi ọha na eze ihe obula.
Mepụta akaụntụ na ọtụtụ nyiwe ngwa ngwa.
Na-akwụ ụgwọ maka adịgboroja na-eso ụzọ.
Ikwu okwu gabiga ókè banyere akara na ika naanị.
Iji adịghị mkpa na Hashtags karịrị.
Kekọrịta oke mmelite na obere oge. (Ma ị nwere ike ọ gaghị abụ ịkekọrịta dị ka mgbe dị ka i nwere ike)
Na-echefu ka nyochagharị.
Na-eleghara ihe -elekọta mmadụ akụkụ nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọtụtụ n'ime mmejọ ndị a na-adịkarị na infographic gara aga anyị kesara azụmahịa na-elekọta mmadụ media emehie. Otu ihe dị mkpa m ga-agbakwunye na nke a bụ na ị ga na-agba mbọ iwulite uru yana duru ndị na-eso ụzọ gị gaa na oku. Anaghị m ekwu okwu na mmelite ọ bụla, naanị na-eburu n'uche na atụmatụ gị kwesịrị ịgụnye na-eduga ndị ọhụrụ na-ege ntị na akara gị ka ị soro, fan, ngosi, budata, denye aha ma ọ bụ gbanwee.
Tags: dijitalụ ahịa dijitalụelekọta mmadụ media infographicSocial Media Marketingemehie mgbasa ozi mgbasa oziemehie ihe mgbasa ozi
Zuru ezu B2B Ahịa Guide to Slideshare
Na-ekwenye kpamkpam na mmejọ ndị ị kwuru n'elu.
Ndị a bụ mmejọ mgbasa ozi ọha na eze kachasị nke ndị mmadụ na-eme. Mgbasa mgbasa ozi bụ ebe kacha mma 2nd na ndị na-azụ ahịa na ndị na-agụ akwụkwọ mgbe engines ọchụchọ.
Tinyere mmejọ ndị a, ịnyeghị mmelite oge niile bụkwa mmejọ nkịtị dịka m chere. Ahụla m ọtụtụ ụdị na Facebook ndị na-adịghị elekọta ndị na-ege ha ntị na ọ bụ ya mere na ha enweghị njikọ.
Ndị mmadụ na-achọkarị ntụrụndụ ma ọ bụ ihe nwere ike ịme ka ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ụdị ọ bụla anaghị enye ụdị ọdịnaya ahụ, enwere ike ịnwe ohere dị elu nke ndị na-ege ntị ga-echezọ aha nke ika ha.
Yabụ iji mee ka aha ha doo ndị na-ege ha ntị, ha ga-enwerịrị ọdịnaya dị otú a nke nwere ike inye aka, nwee obi ụtọ ma mee ka ndị na-ege ha ntị na-arụ ọrụ.
Obi dị m ụtọ na ị kpọtụrụ aha mmejọ mgbasa ozi ọha na eze ndị a. Ya mere Daalụ maka ịkọrọ anyị ya. 😀
Daalụ maka mgbakwunye gị - kwenyere David kpamkpam!
Jul 11, 2016 na 11:22 PM
Daalụ maka nnukwu nghọta na ncheta! Ndị a niile bụcha eziokwu. Ekwenyere m nke ọma! Denye ọtụtụ posts na obere oge bụ n'ezie mmejọ na m na-ezutekarị nsogbu a. Enwere m ike icheta mgbe m ka bụ onye mbido, etinyere m ọdịnaya ugboro atọ n'ụbọchị ma ndị mmadụ na-eleghara ya anya mgbe isiokwu ahụ na-adịghị mma na ndị na - agụ akwụkwọ enweghị ike ịkọ. kwesiri ka enyocha ya mgbe niile. Akwa post!